Akụrụngwa ụgbọala akpaaka akpaaka China Manufacturer
Nkọwa:Ọnụ ụzọ mepere emepe,Onu oghere akpaaka,Ogwe ụzọ mgbochi akpaaka
Home > Ngwaahịa > Ọnụ ụzọ mpepụ akpaaka > Ọnụ Ụzọ Nkedo Glass > Akụrụngwa ụgbọala akpaaka akpaaka
Akụrụngwa ụgbọala akpaaka akpaaka
Ihe Nlereanya.: HF-017
Akụrụngwa ụgbọala mberede akpaaka bụ hotsell nke Hongfa. Hofic bu ika nke Hongfa.
Utu ụzọ mgbochi Hof bụ mmeghe nke nkà na ụzụ elu Europe nke si na Germany na nhazi. N'iji ụkpụrụ nke mkpochapu rotaing mepụtara ọkaibe ụlọ ahịa akpaka. Usoro nchịkwa dị elu nke si na Germany na moto na onye na - ebelata.
Enwekwu nchebe zuru ezu nke usoro ahụ, na-egosi mma nke ejiji.
Jiri nlezianya na-eme ka ndị mmadụ na-abanye ma na-ebute ma chekwaa nchedo na ịnweta ohere. Ọrụ nwere ike ịdabere ma nwee ntụkwasị obi, ndụ ogologo ndụ. Ngwa ngwa ubi dịka: hotels, ụlọ, ụlọ ahịa, showrooms, ụlọ ọrụ na ebe ndị ọzọ.
Microprocessor-a na-achịkwa n'ọdụ ụzọ mpempe akwụkwọ na njirimara mmadụ karị, iji hụ na nlekota na-aga n'ihu na nkwụsị nke ọnụ ụzọ ahụ na n'usoro.
Nwee nhọrọ dịgasị iche iche: naanị idozi, dị mfe iji rụọ ọrụ .Bịnye nsị irighiri ntutu, arụmọrụ na obere mkpọtụ iji nọgide na-adị ogologo ndụ. Ọdịdị nhazi dị mma, tinye obere nha iji kwado mgbidi ahụ na ntinye ma mee ka ọ dị ndụ na obere okpomọkụ na okpomọkụ dị elu.
Ọnụ ụzọ mepere emepe Onu oghere akpaaka Ogwe ụzọ mgbochi akpaaka Ọnụ ụzọ mepere emepe maka Villa Ọnụ ụzọ mepee akpaaka Ọnụ ụzọ maka ire ere Ọnụ ụzọ mepere emepe ọnụ ụzọ Ọnụ ụzọ mepere emepe dị na Ritehite